အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှ လက်ရှိအနေအထား – XB Media Myanmar
အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှ လက်ရှိအနေအထား
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ… ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ဟာဆိုရင် လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာတတ်ကြွစွာပါဝင် ရင်း ပူဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံထားရစဉ်အချိန်မှာလည်း ကျန်းမာရေးအလွန်ဆိုးရွားနေပြီး လမ်းတောင်မလျှောက်နိုင်ပဲ တွဲခေဓသွားရတဲ့ အခြေအနေထိပါပဲနော်…။
ကျန်းမာရေးဆိုးရွားနေတဲ့ပိုင်တံခွန်ဟာ အခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်း စစ်ဆေုးံတွင်ဆေးကုပေးနေတယ်လို့လည်း သတင်းတစ်ချို့တက်လာခဲ့ ပေ မယ့် အမှန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ မင်းသားချောပိုင်တံခွန်ရဲ့လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပုံတစ်ပုံဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာ ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်. ။
၎င်းပုံမှာဆိုရင်လည်း ပိုင်တံခွန်ဟာ အတော်လေးကိုပိန်ချုံးနေပြီး ကျန်းမာရေးဆိုးရွားနေတဲ့ အနေအထားပါ. ။ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ပရိတ်သတ် တွေ ဟာဆိုင်လည်း ဒီပုံလေးကိုကြည့်ရင်း များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း ပိုင်တံခွန်အတွက် ဆု တောင်းပေးကြပါအုံးနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ… ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ မင္းသားေခ်ာ ပိုင္တံခြန္ဟာဆိုရင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာတ တ္ႂ ကြ စြာပါဝင္ ရင္း ပူဒ္မ ၅၀၅(က) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးခံထားရစဥ္အခ်ိန္မွာလည္း က် န္း မာေရးအလြန္ဆိုး႐ြားေနၿပီး လမ္းေတာင္မေလွ်ာက္ႏိုင္ပဲ တြဲေခဓသြားရတဲ့ အေျခအေနထိပါပဲေနာ္…။
က်န္းမာေရးဆိုး႐ြားေနတဲ့ပိုင္တံခြန္ဟာ အခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း စစ္ေဆုးံတြင္ေဆးကုေပးေနတယ္လို႔လည္း သတင္း တစ္ခ်ိဳ႕တက္လာခဲ့ ေပ မယ့္ အမွန္မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ။ မင္းသားေခ်ာပိုင္တံခြန္ရဲ႕လက္ရွိျမင္ေတြ႕ေန ရတဲ့အေျခ အေနတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပုံတစ္ပုံဟာ လူမႈကြန္ယက္မွာ ျပန႔္ႏွံ႔လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္. ။
၎ပုံမွာဆိုရင္လည္း ပိုင္တံခြန္ဟာ အေတာ္ေလးကိုပိန္ခ်ဳံးေနၿပီး က်န္းမာေရးဆိုး႐ြားေနတဲ့ အေနအထားပါ. ။ပိုင္တံခြန္ရဲ႕ ပရိတ္သတ္ ေတြ ဟာဆိုင္လည္း ဒီပုံေလးကိုၾကည့္ရင္း မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ေမတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။ ပရိတ္သတ္ႀကီးက လည္း ပိုင္တံခြန္အတြက္ ဆု ေတာင္းေပးၾကပါအုံးေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္…။
(ဧပြီ ၁၇ ရက်)မနက်၇နာရီအချိန်ခန့်ကဖမ်းဆီးခံ လို က် ရတဲ့ ဇဏ်ခီ နှင့် ခရစ္စတီးနားခီတို့ ပြန်လည်လွတ် မြောက် လာ တဲ့ အကြောင်းအရင်း